သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၅) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 9:22 PM | No မှတ်ချက် |
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို လူငယ် ၁၀ ဦးခန့်က ၀ိုင်မုဒိန်းကျင့်မှု
အိုကီနာဝါက အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေမှာ ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်
တာချီလိတ်မှာ ဘိန်းဖြူ ကီလို ၃ဝ ကျော် ဖမ်းမိ
သဲတင်လာသော ကားမှ လမ်းဘေးတွင် ရပ်ထားသော ဆိုင်ကယ်အားဝင်တိုက်မှုကြောင့် လူတစ်ဦးသေဆုံး
မန္တလေးမင်္ဂလာဈေး အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး(သို့)ပြုပြင်ရေး မဲခွဲရာ အသစ်တည်ဆောက်ရေး ၃ မဲအသာဖြင့် အနိုင်ရ
ကချင်မန္တလာ ကားလေး ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ် (၂)ဦးသေဆုံး (၉)ဦး ဒဏ်ရာရ
ပြည်သူများ၏ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ချိန်ခွင်လျှာ ညီမျှအောင် စီမံ ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် လမ်းညွှန်
တရုတ်၏ ပထမဆုံး လူလုပ်ကျွန်းအား ပြည်မကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ပေးမည့် တံတား တည်ဆောက် ပြီးစီး
ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီမောင်းသူ အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးမှုအား ပြည်မြို့မရဲစခန်းမှ စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေ
သီပေါမြို့ရှိ စစ်ရှောင်စခန်းမှ ကလေးလးငယ်များမှ ကျောင်းတက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေ
တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ပေးရန် ကျောက်မဲမြို့တွင် သံဃာတော်များ ဦးဆောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်
အုပ်စုဖွဲ့လုယက်သူများကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး
အိန္ဒိယနိုင်ငံသမိုင်းတလျှောက်အပူဆုံးအဖြစ် ၅၁ ဒီဂရီအထိ စံချိန်တင်မြင့်တက်
ဖားကန့်ကို ရာဇဌာနီ ကုမ္ပဏီ ယမ်းတန်ချိန် ၂ဝဝဝ သယ်ယူ
ဘင်္ဂါလီ (၈)ဦး အမ်း - မင်းဘူး လမ်းပေါ်မှာ ဖမ်းမိ
အမြန်လမ်းတွင် ကားနှစ်စီး ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်မှောက်
ဖလူဂျာက IS တပ်မှုး သေဆုံးသွားပြီလို့ အမေရိကန် ထုတ်ပြန်
မြေထဲပင်လယ်ထဲ ရွှေ့ပြောင်းသူတွေရဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေ တွေ့ရှိ
မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး အမှတ်(၄၂) အစုန် ဒုတိယအမြန်ရထားတွဲ ဘီးချော်မှုဖြစ်ပွား
ဆီးရီးယားစစ်ပွဲအတွင်း လူပေါင်း ၂၈ဝဝဝဝ ကျော်သေဆုံးခဲ့ရ
အမေရိကန်တွေ Social Media သတင်းကို အားကိုး
ဘန်ကီမွန်း တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ ဖြစ်လာနိုင်သလား
Posted: 28 May 2016 06:57 AM PDT
အမျိုးသမီးကို မုဒိန်းကျင့်သော လူငယ်များကို ဖမ်းဆီးရမိ မနေ့ မေလ ၂၇ ရက်နေ့ ၂၀၁၆ခုနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံ ယလာခရိုင် ယလာမြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဆီသို့ အသက် ၂၅နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ မိမိကို လူ ၁၀ ဦးခန့်က ရေလှောင်ကန်ဘေးမှာဆွဲခေါ်သွားပြီး မုဒိန်းကျင့်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြောင်းကို တိုင်ကြားပါတယ်။ တရားလိုကို စစ်ဆေးမေးမြန်းကြည့်ရာ သန်းခေါင်ကျော် ၂ ချက်တီးအချိန်တွင် မိမိရဲ့နေအိမ် ယလာမြို့သို့ပြန်လာပြီး ပတ်တနီခရိုင်
Posted: 28 May 2016 05:48 AM PDT
တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့ အပြုအမူတွေကို ဒေသခံတွေက မကြေနပ် ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါ ကျွန်းမှာ အမေရိကန် မရိန်းတပ်သားဟောင်းတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို အဓမ္မကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သံသယရှိစရာ အဖြစ် ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန်စစ်တပ်က ကျွန်းပေါ်က စခန်းတွေမှာ ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန် ထားလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်က အခု ကိစ္စအတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်းနဲ့ ပြန်လည် ညီညွတ်ခြင်း ရက်ပေါင်း၃၀ ကာလ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ညမထွက်ရ အ
Posted: 28 May 2016 05:45 AM PDT
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းကို သွားအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်နေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာမယ့် ဇွန်လအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံကို တရားဝင်ခရီးစဉ် သွားရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ ထိုင်းနိုင်ငံကို လာရောက်မယ့်အကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
Posted: 28 May 2016 05:42 AM PDT
တာချီလိတ်မြို့မှာ ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း ၅ ထောင်ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘိန်းဖြူဘလောက်တုံး ကီလို ၃ဝ ကျော်ကို မေလ ၂၈ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့စဉ်။ ဓါတ်ပုံ - တာချီလိတ်မူးယစ် ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် တာချီလိတ်မြို့မှာ ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း ၅ ထောင်ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘိန်းဖြူဘလောက်တုံး ကီလို ၃ဝ ကျော်ကို ဒီကနေ့ မေလ ၂၈ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ တာချီလိတ် မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတ
Posted: 28 May 2016 05:21 AM PDT
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၊ လိပ်အင်းရပ်ကွက်၊ကျောင်းကုန်းပိုင်းတွင် မေ ၂၇ ရက် ညနေပိုင်းက သဲတင်လာသော ကားမှ လမ်းဘေးတွင် ရပ်ထားသော ဆိုင်ကယ်အားဝင်တိုက်သဖြင့် လူတစ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ "ကားသမားက တခြားကားကို ရှောင်ရင်း အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဖြစ်သွား တာပါ။ နောက် လမ်းကလည်း ကုန်းဆင်းဖြစ်နေတော့ မဖြစ်သင့် ဘဲဖြစ်သွားရတာပါ။ ယာဉ်မောင်းတွေအနေနဲ့ဂရုစိုက်ဖို့တော့ လိုတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးနစ်နာရတယ်''ဟု သထြုံ
Posted: 28 May 2016 05:18 AM PDT
မန္တလေးမြို့တွင် မတ် ၂၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက မီးဘေးသင့်ခဲ့သည့် မင်္ဂလာဈေးအသစ် ပြန်လည်တည်ဆောက် ရေးနှင့် အကြီးစားပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဈေးသူဈေးသားများထံမှ ဆန္ဒမဲကောက်ခံခဲ့ရာ အသစ်တည်ဆောက် ရေးက ၃ မဲအသာဖြင့် အနိုင်ရသွားကြောင်း၊ မြို့တော်စည်ပင်သာယာ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။ ဈေးသူဈေးသားနှင့် လူနေတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်များအား မေ ၂၅ ရက်က ဆန္ဒမဲကောက်ယူ၍ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မဲများ စီစစ်ခဲ့ရာ ဆန္ဒမဲ ၆၆၈ မဲတွင် အသစ်တည်ဆောက်ရန်
Posted: 28 May 2016 05:17 AM PDT
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို သီပေါမင်းလက်ထက်ကပင် စတင်ခဲ့သည်ဆို၏။ ထီလုပ်ငန်းပေါ်လာခြင်းသည် တိုင်းပြည်စီးပွား ရေးကျဆင်းကြောင်း ပြသသည့် လက္ခဏာတရပ်ဟုလည်း ဆိုကြသည်။ သို့သော် ယခုခေတ်၌ နိုင်ငံအားလုံးနီးပါး ထီရောင်းကြပေသည်။ တချို့စင်ကာပူထီကို မြန်မာနိုင်ငံမှ လှမ်းကံစမ်းကြသည်။ အင်္ဂလန်ထီလည်း နာမည်ကြီးသည်။ မြန်မာတို့နှင့်ကာလရှည်စွာပွန်းတီး ရင်းနှီးခဲ့သည်က ထိုင်းထီ (သို့မဟုတ်) ချဲ။ ၁၉၈၀ ပြ
Posted: 28 May 2016 03:23 AM PDT
ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနား ဗျူ ဟာလမ်း ပင်ဝယ်ကျေးရွာအနီးတွင် ပင်ဝယ်ရွာနှင့်ပင်းတင် ရွာကြား (၂၈.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ယနေ့ နံနက် ၃း၃၀ အချိန်ခန့်တွင် လမ်းဘေးခေတ္တ ရပ်နားထားသော ၆ဘီးကားယာဉ်ကို မြစ်ကြီးနားမှ မန္တလေးဘက်သို့ မောင်းနှင်လာသော ကချင်မန္တလာ ကားလေး နှင့် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ကားလေးမှာ ခရီးသည်နှင့်ယာဉ်မောင်းသူ အပါအဝင် ၁၆ဦးလိုက်ပါလာရာ ယာဉ်မောင်းမှာ ရန်ကုန် မှော်ဘီ စမ်းချောင်းရွာနေ အ
Posted: 28 May 2016 03:12 AM PDT
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်များ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Myanmar State Counsellor Office) ရန်ကုန် ၊ မေ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား အသစ် စတင်ဆောင်ရွက်သည့် ကာလတွင် နေပြည်တော် ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတို
Posted: 28 May 2016 03:04 AM PDT
တရုတ်၏ ပထမဆုံး လူလုပ်ကျွန်းနှင့် အဆိုပါ ကျွန်းအား ပြည်မကြီး နှင့် ဆက်သွယ် ပေးထားသော တံတားအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) ဖူကျန့်၊ မေ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး လူလုပ်ကျွန်း နှင့် ပြည်မကြီးကို ဆက်သွယ် ပေးနိုင်မည့် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဖူကျန့် ပြည်နယ် ရှိ တံတားအား တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ တံတားသည် အလျား ၁,၀၁၀.၈ မီတာ ရှည်လျားပြီး လူလုပ်ကျွန်း ဖြစ်သည့်
Posted: 28 May 2016 02:45 AM PDT
ပြည် မေလ(၂၇)ရက်နေ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်ခရိုင် ၊ ပြည်မြို့ ၊ ရွာဘဲရပ်ကွက်၊ သန္ဓေပင်ရပ် ၊ နဝဒေးလမ်းမပေါ်တွင် ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီမောင်းနှင်သူ အမျိုးသားတစ်ဦး ဒဏ်ရာများဖြင့် ဆိုင်ကယ်တိမ်းမှောက် သေဆုံးမှုအား ပြည်မြို့မရဲမှအမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မေလ(၂၇)ရက်နေ့ ည(၁၁း၄၀)အချိန်ခန့် နဝဒေးလမ်းအတိုင်း နဝဒေးကားကြီးဝန်းဘက်မှ နဝဒေးတံတားဘက်သို့ ဦးအေး
Posted: 28 May 2016 02:36 AM PDT
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ သီပေါမြို့ရှိ မြို့ဟောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ခိုလှုံနေသော စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် စခန်းမှ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးသူငယ်များမှာ ကျောင်းတက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ နမ္မကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော တိုက်ပွဲများကြောင့် အနီးဝန်းကျင်ရှိကျေးရွာများမှ ရွာသားများသည် စစ်ဘေးလွတ်ရာ သီပေါမြို့နှင့် အခြားမြို့များသို့ စစ်ရှောင်လာရာတွင် အဆိုပါမြို့ဟောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိေ
Posted: 28 May 2016 02:34 AM PDT
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်ပေးရန်အတွက် ကျောက်မဲဒေသခံ ရှမ်းလူမျိုးများနှင့် သံဃာတော်များ မေလ ၂၈ ရက်က ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ “ကျွန်မတို့ဒီလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပေ့ါ တပ်မတော်ရော၊ ရှမ်းရော၊ ပလောင်ရော တိုက်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ ပြည်သူတွေပဲ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပါ” ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ကျောက်မဲဒေသခံ မနန်းစံအေးက The
Posted: 28 May 2016 02:29 AM PDT
မော်ချီးရဲအုပ် အောင်စိုးတင့် သေနတ်ပစ်ဖောက် ခြိမ်းခြောက်နေစဉ်။ Photo: Mg Mg Linn Let/ Facebook ကယားပြည်နယ် ဖားဆောင်းမြို့နယ် မော်ချီးမှာရှိတဲ့ အလင်းတန်းပြောင်းရွှေ့ကျေးရွာမှာ မနေ့ညနေက အရပ်ဝတ်နဲ့ ရဲအုပ်တစ်ဦးက အရက်ဘီယာရောင်းတယ် ဆိုပြီး ဒေသခံတစ်ဦးကို ဖမ်းမယ်လို့ ပြောရာက အဲဒီရွာဒေသခံတွေက ဖမ်းဝရမ်းပြဖို့ တောင်းခံရာမှာ အခြေအတင် စကားများပြီး ရဲအုပ်က သေနတ်ပစ်ဖောက် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံတွေက
Posted: 27 May 2016 08:48 PM PDT
နေပြည်တော် မေ ၂၇ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် မှုခင်းကျဆင်းရေးအတွက် မေ ၂၅ ရက် ည ၁ဝ နာရီက နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဒုရဲမှူး ခင်မောင်ဦးစီးသောအဖွဲ့နှင့် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ပတ္တာနယ်မြေစခန်း မှူး ရဲအုပ်အောင်မျိုးလွင်နှင့်အဖွဲ့သည် ပျဉ်းမနားမြို့ ရွာကောက် ရပ်ကွက် ပန်းခင်းမီးပွိုင့်အနီး၌ ရောက်ရှိစဉ် ရွာကောက်ရပ်ကွက် အတွင်းနေထိုင်သော ကျော်စိုးနိုင်ပါ နှစ်ဦးထံမှ ပန်းခင်းမီးပွိုင့် ဘက်မှ ဆိုင်ကယ်သုံးစီးဖြ
Posted: 27 May 2016 08:40 PM PDT
အပူလှိုင်းဖြတ်သန်းမှုကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၅နှစ် မတ်လမှစတင်ကာ ယခုနှစ်ထိ အပူရှိန် ပြင်းထန် လျက်ရှိသည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ၀က်ဘ်ဆိုက် တစ်ခု၏မေ ၂၆ရက်ဖော်ပြချက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက် မြောက်ပိုင်း ရာဂျစ်စတန်ပက်လိုဒီမြို့တော်တွင် မေလ ၁၉ရက်က အပူချိန် ၅၁ ဒီဂရီအထိ ခုန်တက်ခဲ့ကာ သမိုင်းတွင်အမြင့်ဆုံးအပူချိန် အဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ရာဂျစ်စတန်၏ အပူချိန်လွန်ကဲမှုမှာ အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပြီး
Posted: 27 May 2016 07:39 PM PDT
ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စု မှော်စီစာကျေးရွာအနီးက သာယာကုန်းကမ်းပါးမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းက ကျောက်စိမ်းတူးဖော်နေ မှုကို တွေ့ရစဉ်။ Photo: Kyaw Myo Min/RFA ရာဇဌာနီ ကုမ္ပဏီက ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်း တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ တန်ချိန်နှစ်ထောင်လောက်ရှိတဲ့ ယမ်းတွေကို မနေ့က ကားအစီးတစ်ရာကျော်နဲ့ ဖားကန့်ကို သယ်ယူနေပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားတယ်လို့ပြော
Posted: 27 May 2016 07:29 PM PDT
28.5.2016 မေလ (၂၈)ရက်နေ့ နံနက် ၄း၅၅ အချိန်ခန့် က ရခိုင်ပြည်နယ် အမ်းမြို့ ဘက်မှ မကွေးတိုင်း မင်းဘူးမြို့ဘက်ကို မောင်းနှင်လာတဲ့ ကားတစ်စီးကို စစ်ဆေးရာကနေ တရားမ၀င် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ (၈)ဦး ဖမ်းဆီးမိကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီ (၈)ဦးကို သယ်ယူသူ (၃)ဦးနဲ့ အတူ ဂုတ်ကြီးစခန်းမှူး ရဲအုပ်ကျော်မျိုး နဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာလူငယ်များ ပူးပေါင်း ဖမ်းဆီးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတ
Posted: 27 May 2016 07:11 PM PDT
မေလ ၂၈ ရက် နံနက် ၆ နာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင် အမြန်လမ်းမိုင်တိုင် ၂၇၆ ၌ နေပြည်တော်ဘက်သို့ ငါးများတင်ဆောင်မောင်းနှင်လာသည့် ၁၀ ပေ ကုန်တင်ယာဉ်တစ်စီးတိမ်းမှောက်ခဲ့ပြီး မိုင်တိုင် ၂၇၈ တွင်လည်း ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆိုသလို မန္တလေးဘက်ကိုမောင်းနှင်လာသည့် SURF တစ်စီးမှောက်ခဲ့ရာ ကျား ၂ ဦးနှင့် မ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ သတင်း-ဥက္ကာ ဓာတ်ပုံ-သက်မျိုးဦး Myanmar Citizen News Agency
Posted: 27 May 2016 06:51 PM PDT
မြို့ထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ အရပ်သားတွေထဲက မိသားစု ရာနဲ့ချီပြီး ထွက်ပြေး လာနိုင်။ အီရတ်နိုင်ငံ ဖလူဂျာ မြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ မဟာမိတ် အဖွဲ့ရဲ့ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ အတွင်း သေဆုံးခဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံ IS လက်နက်ကိုင် အယောက် ၇၀ ထဲ ဖလူဂျာမြို့ကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ IS တပ်မှုးကိုယ်တိုင် ပါဝင်တယ် ဆိုပြီး အမေရိကန် စစ်တပ်က ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ရက် အတွင်း ဖလူဂျာ မြို့က IS ပစ်မှ
၅ ရက် အတွင်း ကယ်ဆယ်ခဲ့ရသူ အရေအတွက် ၁ သောင်း ၄ ထောင် ရှိ။ မြေထဲပင်လယ်ပြင် ကနေ ရွှေ့ပြောင်းသူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ရုပ်အလောင်းပေါင်း ၅၅ လောင်းကို တွေ့ရှိ ခဲ့ရတယ် ဆိုပြီး အီတလီ ရေတပ်က ပြောပါတယ်။ ရေထဲ နစ်တစ်ဝက် ဖြစ်နေတဲ့ ရာဘာ လှေပေါ်မှာ တွေ့ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး၊ ကျန် အယောက် ၁၃၀ ဝန်းကျင်ကိုတော့ ကယ်ဆယ် နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သောကြာနေ့က တစ်ရက် ထဲမှာတင် မြေထဲပင်လယ်ကို ဖြတ်ကူးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ရွှေ့ပြောင်း
နဘား မေ ၂၇ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင် အင်းတော်မြို့နယ် နဘားဘူတာအဝင် ၌ မေ ၂၇ ရက် ညနေ ၃ နာရီက အမှတ်(၄၂) အစုန် ဒုတိယအမြန် ရထားတွဲ ဘီးချော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ စက်ခေါင်းအမှတ်(DD/ 962) စက်ခေါင်းမောင်း ဦးသန်းဇော် နှင့် ရထားထိန်း ဦးစိုးမြင့်ဦးတို့ မောင်းနှင်လာသော အမှတ် (၄၂)အစုန် ဒုတိယအမြန်ရထားသည် ပင်ဝဲ ဘူတာမှ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် မန္တလေးဘက်သို့ ထွက်ခွာခဲ့ရာ စာတိုက်တွဲအမှတ်
Posted: 27 May 2016 06:49 PM PDT
လန်ဒန် မေ ၂၇ လွန်ခဲ့သည့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှ စတင်ဖြစ်ပွားသည့် ဆီးရီးယားပြည်တွင်း စစ်အတွင်း သေဆုံးသူ ၂၈၂ဝဝဝ ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဆီးရီးယားပြည်တွင်း စစ်ကို စောင့်ကြည့်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့က ပြောကြားသည်။ ဗြိတိန်အခြေစိုက် ဆီးရီးယားလူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က မေ ၂၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာရာ၌ သေဆုံးသူများတွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အရပ်သား ၈၁ဝဝဝ ပါ
Posted: 27 May 2016 06:48 PM PDT
လူမှုကွန်ယက် Social Media အမေရိကန်နိုင်ငံသား အများစုဟာ အခုအခါမှာ သူတို့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လူမှုမီဒီယာ ကွန်ယက်တွေကနေ တဆင့် အဓိက ရယူနေတယ်လို့ လူထုစစ်တမ်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ်တွေ့ရပါတယ်။ Pew သုတေသနဌာနက ကောက်ယူတဲ့ စစ်တမ်းအတွက် တုန့်ပြန်သူ ၆၂ % က သူတို့ဟာ သတင်း အချက်အလက်တွေကို ရဖို့ Facebook တို့ Reddit တို့ Twitter တို့လို လူမှုကွန်ယက် တွေကို သုံးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်တုန်းက
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Ban Ki-moon နဲ့ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ Park Geun-hye။ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းရဲ့ ဒီသီတင်းပါတ်ထဲ သူ့မွေးရပ်ဌာနေ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံကို သွားရောက်လည်မှုကနေ သူဟာ ရှေ့နှစ်ထဲ ကုလသမဂ္ဂတာဝန်တွေ ပြီးဆုံးတဲ့ အခါ တောင်ကိုရီးယား သမ္မတဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ရှေ့နှစ် ဇန်နဝါရီလ တရက်နေ့မှာ ကိုရီးယားကို ပြန်မယ်လို့ ဒီသီတင်းပါ
✿ မိဘကျေးဇူးအကျေဆပ်နည်း ✿
"မျက်မှန် မတပ်ရအောင် ဆောင်ရန် /ရှောင်ရန်များ"
ပို့ပေးတဲ့ပန်းစည်းလေး ဒီနေ့ပဲ လက်ခံရရှိပါတယ်ရှင်။
ဆေးဖက်ဝင်ကြောင်လျှာပင်အကြောင်းနှင့် အသုံးဝင်မှု မြန...
အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင် ရှယ်ပြီးသိမ်းထားပါ ဖုန်းပျောက်သ...
နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀)ကျော် န၀၀ါသီ (သို့မဟုတ်) ပြည်မြို...
Ibanking အသုံးပြုသူရွှေမြန်မာများ သတိပြုရန်
“ဆာဗေး နဲ့ ဂျာအေး”
Not တစ်လုံး စွမ်းအားမြှင့်ပြီးသုံးချင်တဲ့အခါ
အင်္ဂလိပ် သင်ခန်းစာ ၁၀၀ .Level (1) Lesson (26)
အသက် ရှည်လို ( ဂျင်း) ကိုမြို
"အဖေကြီးပြောတဲ့ တကယ့်ပုံပြင်" (လယ်တွင်းသားစောချစ်)
စားသောက်ဆိုင်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြောများ (၁) English ...
Breast Cancer Treatment Regimes ရင်သားကင်ဆာ ကုထုံး...
❝ စောဘွဲ့မှူးအမှတ်တရ ❞ အမှတ် ➌ ✪ ကျွန်တော့် ဆရာ ...
လူတိုင်း မသိမဖြစ်သော တို့ဆေး အန္တရာယ်အကြောင်း (လူတိ...
လူတိုင်းမသိသေးတဲ့ဦးနှောက်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀)မျိုး
ပစ္စုပ္ပန် ကမ္မဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတည်ထောင်သူ ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော...
'ဂျပန် လူမျိုးတို့ရဲ့ စာရိတ္တ'
လူတွေ ဘာကြောင့် ဒေါသထွက်ရင် အော်ပြောသလဲ ?
အရမ်းကို စိတ်ထိခိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု
အမေက “မှီခို” တဲ့လား!
Due to သုံးဖို့
အမျိုးသမီးတွေ သွေးဆုံးချိန်မှာသိစရာ (သားဖွားနှင့်...
Leg cramps ကြွက်တက်တာ ဘာလုပ်မလဲ
တက္ကသိုလ်နောက်ခံ ဗယာကြော်ဇာတ်လမ်း (မင်းလူ)
အံ့သြတဲ့ဟန် လေးနက်တဲ့ပုံစံ စတဲ့ တင်စားချက်လေးတွေနဲ...
*** ကားတစ်စီးမှာ အခြေခံသိထားသင့်တဲ့အချက်တွေ ***
အိုင်းစတိုင်း၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်း အကျဉ်း
ခေတ်တစ်ခေတ်နှင့် ပညာရေးဥပဒေ || ဒေါက်တာခင်မောင်ညို ||
အသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သော မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေအရ မော်တော်ယာဥ...
Paracetamol (ပါရာစီတမော) လူပြောများလာပြီ
သူအလုပ်ပြုတ်နေကြောင်းသူ့ ဇနီးကို မပြောပြ ခဲ့ပါဘူး
❝ ရော့ခ်ဒိုင်ယာရီ ❞
Telephone Expressions (5)